Ampifanaraho amin'ny alàlan'ny mailaka mandray andraikitra amin'ny finday sy finday | Martech Zone
Ampifanaraho ny mailaka mamaly amin'ny finday sy ny finday
Friday, May 17, 2013 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Nanaitra anao izahay mailaka mahasoa amin'ny finday ary mbola tsy mihaino ianao! Statistics mpamaky mailaka finday mipoaka - raha ny tena izy mahatratra ny mpamaky mailaka amin'ny birao.
Ka maninona no tsy nohavaozinao ny maodelim-barotra amin'ny mailaka ho mora-mihetsika? Tsy misy fialantsiny ry havana, Email Monks izao no manome serivisy izay ahafahanao manasa ny mpamorona anao handefa rakitra Photoshop ary hanao asa tsara izy ireo amin'ny fananganana endrika mailaka mamaly izay toa tsara amin'ny finday. Mbola tsy resy lahatra ve ianao mila iray? Ity ny infographic-zareo (tsindrio avy amin'ny fampiasa iraisana):
Tags: moanina mailakamailaka findaymailaka mamaly findaymailaka mahasoa amin'ny findaymailaka mamaly
Torolàlana momba ny marketing amin'ny atiny
Manampia fanamarihana amin'ny horonan-tsarinao Youtube
May 20, 2013 amin'ny 7: 53 AM
Vaovao tsara. Fa angaha moa misy olona hafa no voahodidin'ny moanina tanana ankavia??? oO
May 20, 2013 ao amin'ny 1: 24 PM
Taiza aho no tsy nahita ny tanana havia?
May 21, 2013 amin'ny 9: 24 AM
Ny moanina hatramin'ny farany ambany dia mamelatra ny sandriny havanana fa ny ankihibeny dia eo amin'ny ilany diso amin'ny tanany na ny tanany dia tanana havia fa tsy havanana. 🙂
May 21, 2013 amin'ny 10: 16 AM
Oh! tsy tsapako akory izany!